म्याग्दीबाट पोखारा जादै हुनुहुन्छ ? आजदेखि दैनिक ६ घण्टा बन्द गरिँदै छ, यी बैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुहोस् ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार म्याग्दीबाट पोखारा जादै हुनुहुन्छ ? आजदेखि दैनिक ६ घण्टा बन्द गरिँदै छ,...
म्याग्दीबाट पोखारा जादै हुनुहुन्छ ? आजदेखि दैनिक ६ घण्टा बन्द गरिँदै छ, यी बैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुहोस् !
२०७५, १२ पुष बिहीबार १०:०२
म्याग्दीलाई राजमार्गसंग जोड्ने बेनी–पोखरा राजमार्गमा बिहिबारदेखी दैनिक ६ घण्टा बन्द हुने भएको छ । सडक फराकिलो र स्तरउन्नतीका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा दैनिक ६ घण्टा बन्द गरेर काम गर्ने जनाइएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने कास्की र पर्वतको सिमाना अँधेरीखोला देखि डिमुवाबजार सम्म बिहान १० बजे देखि साँझ ४ बजे सम्म सडक बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।
दैनिकजसो सयौं यात्रु आवतजावत गर्न मुख्य सडक बन्द भएपनि मोटरसाईकल तथा साना सवारीसाधनलाई सहज आवतजावत गर्न मिल्ने बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ । बैकल्पिक सडकको दोबिल्लाबाट १ किलोमिटर अगाडी गएपछि बाँयाँ सिल्मी जाने कच्चीबाटो जाने, सिल्मीहुँदै ७ किलोमिटरमा ठूलीपोखरी पुगिन्छ । ठूलीपोखरीको मातेपानी चोकमा पुगेपछि बायाँ रोहोटे हुँदै जाने सडक ५ किलोमिटर अगाडी गएपछि आर्थरको अँधेरी नेटा पुगिन्छ ।
अँधेरीनेटाबाट दाँयाँ ४ किलोमिटरमा स्याङजाको फूलबारी पुगिन्छ । फूलबारीबाट पक्की सडक नागडाँडा हुँदै ४४ किलोमिटरमा पोखरा जान सकिन्छ ।उक्त सडकको पोखरा नागडाँडा २७ किलोमिटर, नागडाँडा फूलबारी १७ किलोमिटर, फूलबारी आर्थर ४ किलोमटर, आर्थर ठूलीपोखरी ५ किलोमिटर र ठूलीपोखरी दोबिल्ला ८ किलोमिटर गरी कुल ६१ किलोमिटर रहेको छ ।
६ घण्टा सवारी साधन रोक्नु भन्द १ घण्टा बढि समय खर्चिएर उक्त मार्ग प्रयोग गरेमा तीन घण्टामै पोखरा पुग्न सकिन्छ । यता पर्वतको ठुलीपोखरीदेखि सोहि बाटो हुँदै दैनिक पोखरा बस सेवा संचालन भैरहेको छ । अत्याधिक सवारीचापले आवतजावतमा समस्या हुने भएपनि ट्राफिक प्रहरीलाई समेत परिचालन गरिने छ ।
अत्याधिक चाप हुने समयमै बाटो बन्द हुनेभएपछि यात्रुलाई बैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा सतर्कता अपनाउन समेत पर्वत प्रहरीले अपिल गरेको छ । एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साधनहरुले बाहेक अन्य सवारीसाधनहरुले उक्त रुट प्रयोग गर्न सकिने निर्माण कम्पनीले पनि सुझाव दिएको छ । सडकमा धुलो भएपनि फराकिलो र गुणस्तरीय भएकाले लामो समय कुर्नभन्दा सोहि मार्ग हुँदै पोखरा जानका लागि सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । उक्त बैकल्पिक रुट प्रयोग गर्दा कच्ची सडक भएकाले केही समय बढी लाग्छ तर दुरिको हिसाबले खासै फरक छैन ।
Previous articleम्याग्दीका एक यूवाले बागलुङमा झुण्डिएर आत्महत्या
Next articleपर्यटकीयस्थल लभ्लीहिलको विकासमा सरोकारवाला एकजुट